NEWS Archives - Page3of 154 - SPORTS MYANMAR
ယူရို ရှုံးကြွေးကို ၃ လ အတွင်းပြန်ဆပ်ကာ ဗိုလ်လုပွဲတက်သွားခဲ့တဲ့ စပိန် အသင်း
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ တုန်းက အီတလီ အသင်းဟာ အင်္ဂလန် နိုင်ငံ ဝင်ဘာလေ ကွင်းကြီးထဲက ယူရို ၂၀၂၀ ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်မှာ စပိန် အသင်းကို ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး ဗိုလ်လုပွဲကို တက်လှမ်းခဲ့ ပါတယ် ။ ၃ လ အကြာမှာတော့ စပိန် အသင်းဟာ …
ယနေ့ညမှာ ဥရောပ နေရှင်လိဂ် ပြိုင်ပွဲရဲ့ အကြို ဗိုလ်လုပွဲ တပွဲ အဖြစ် အီတလီ အသင်းနဲ့ စပိန် အသင်းတို့ အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင် ကစားဖို့ ရှိနေပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ် အတွင်းကမှ ယူရို ချန်ပီယံ ဖြစ်ထားတဲ့ အီတလီနဲ့ ယူရို အကြို ဗိုလ်လုပွဲ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ စပိန် အသင်းတို့ရဲ့ …
တောင်အမေရိကသားတွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရတဲ့ EPL ၊ ဗန်ဒီဘိ ကို စောင့်ကြည့်လာတဲ့ စပိန်ထိပ်သီး တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစားသတင်းများ
ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းတွေဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲတွေ ကစားဖို့ အတွက် တောင်အမေရိက နိုင်ငံတွေဆီ ပြန်သွားကြမယ့် သူတို့ရဲ့ ကစားသမားတွေကို စောစီးစွာ ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေကြ ပေမယ့် အခက်အခဲတွေ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ အကယ်၍ အဆိုပါ ကစားသမားတွေ ဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်အတိုင်း အင်္ဂလန် ကို …
သက်တမ်းတိုးလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ၊ ရိုးမားကအကျိုးတရားတွေ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အေဘရာဟမ် တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်း များ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ အိုလေဂန်နာ ဆိုးရှား ရဲ့ လက်ထောက် နည်းပြ အဖြစ် လုပ်ကိုင် နေတဲ့ မိုက်ဖီလန် ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ် အထိ စာချုပ် သက်တမ်းတိုး ချုပ်ဆို လိုက်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ရိုးမားကို ပြောင်းရွှေ့ ကစားပြီး ဂိုးတွေ သွင်းပြနေတဲ့ …
ဒီတပတ် မှာတော့ ကလပ် အသင်းတွေ ရဲ့ ပွဲတွေ ခေတ္တရပ်နားပြီး ၂၀၂၁ ရဲ့ နောက်ဆုံးပိတ် နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်တွေ ကို ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လာမယ့် ၁၄ ရက်အတွင်းမှာ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲတွေ ၊ ခြေစမ်းပွဲတွေ အပြင် ဥရောပ နေးရှင်းလိဂ် ရဲ့ နောက်ဆုံး …
ပြီးခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ကာလမှာ တန်းလန်းကြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမ်ဘာပေ နဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် တို့ အကြားက သတင်းတွေ ရဲ့ ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာ တချို့ က ပြင်သစ် လူငယ်လေး ကိုယ်တိုင်က ဖွင့်ချလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီ က ရာမို့စ် ၊ ဒွန်နာရမ်မာ ၊ ဝိုင်နယ်ဒမ် …
ထိပ်သီးတွေ နိုင်ပွဲပျောက်တဲ့ည ၊ ဘာစီလိုနာကို ကူညီချင်တဲ့ တိုရေး ၊ ဖာဂီ ရဲ့ လက်ဆောင်ကို ငြင်းတဲ့ ခါဘစ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစား ခဲ့တဲ့ ဥရောပ ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ထိပ်သီးကလပ် အသင်းတွေ တိုက်ဆိုက်စွာပဲ နိုင်ပွဲ ပျောက်ခဲ့ ကြပါတယ် ။ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ မန်စီးတီး နဲ့ လီဗာပူး တို့ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံ ကြပြီး ၂ ဂိုးစီ သရေ ပွဲနဲ့ အဆုံးသတ် ခဲ့ကြသလို စပိန် …
ယူနိုက်တက် အတွက် သတင်းကောင်း ၊ နိုင်ငံပွဲမတိုင်ခင် ကိုဗစ်ကိစ္စ ၊ ရီးရဲ ရဲ့ ပစ်မှတ်သစ် တို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
October 1, 2021 October 1, 2021 - by Editor
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးလေး မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ကတော့ ဒီကနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ် မှာ လေ့ကျင့်ခန်းပြည့် ပြန်လည် ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ရက်ဖိုဒ့် ဟာ လာမယ့် နိုင်ငံ တကာ ပွဲစဉ်တွေ ပြီးမှသာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အတွက် …
ဟက်ထရစ်သွင်းတဲ့ ကိန်း ၊ ယူရိုပါလိဂ်မှာ ခြားနားခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန် ၂ သင်း တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါ လိဂ် မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် က လက်စတာ စီးတီး ဟာ အဝေးကွင်းမှာ လီဂီယာ ဝါဆော အသင်းကို ၁ – ၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒေးဗစ် မိုရက်စ် ရဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း ကတော့ ပုံစံကောင်းကို ဆက်လက် …
ယူရိုပါလိဂ် ပွဲစဉ် ၂ အတွက် မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ
ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေ အပြီးမှာ ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲကို ယနေ့မှာ ကစားသွားရမှာ ဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ကြယ်ပွင့်ဟောင်း မိုက်ကယ်အိုဝင်ဟာ ဗြိတိန်ကလပ်တွေရဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ပွဲစဉ် ၂ ကို ယခုလိုပဲ ခန့်မှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁~စပါတာပရပ် vs ရိန်းဂျား စတီဗင်ဂျာရတ်ရဲ့ ရိန်းဂျားအသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ ပုံစံကောင်းကို မရသေးပေမယ့်လည်း ပြည်တွင်း မှာတော့ ဆက်လက် လွှမ်းမိုးထားဆဲ …
“မက်ဆီ က ဘာပေ ကို ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးရပါမယ်” – နီကိုလပ်စ် အနယ်ကာ
ပြင်သစ် နဲ့ PSG အသင်းတို့ရဲ့ တိုက်စစ်မှူးဟောင်းကြီး နီကိုလပ်စ် အနယ်ကာ က လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဟာPSG အသင်းရဲ့ စူပါ စတား ဖြစ်သူ တိုက်စစ်မှူးလေး ဘာပေ ရဲ့ ကစားပုံ နဲ့ လိုက်လျော ညီထွေ ကစားနိုင်အောင် ပြောင်းလဲ သင့်ရင် ပြောင်းပေး ပေးဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို …